वीपी विचारको अपमान
आलोक नेपाली । प्रत्येक नेपालीको परिवारको एउटा बस्ने घर, एउटा दुहुनो गाई, विरामी पर्दा ओखतीमूलो गर्ने र बालबच्चालाई पढाउनसक्ने अवस्था देख्न चाहन्थे वीपी कोइराला । साहित्य सृजना, राजनीतिक चिन्तन र बौद्धिकतामा तेजस्वी वीपीको तस्वीरलाई नेपाली काँग्रेसले प्रयोग गर्दै आएको छ । परिवार र पार्टीभन्दा माथि उठेर देशको सम्मानित नेता बनेका थिए वीपी । त्यसैले उनीबारे दक्षिण एशियामात्र नभई विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले शोध गर्दै आएका… विस्तृत समाचार
किन बढारियो कांग्रेस ?
२०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको नेपाली कांग्रेसले यही बैशाख ३१ गते र आषाढ १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा आफूलाई पहिलो राजनीतिक दलको रुपमा स्थापित गर्न सकेन् । अब प्रदेश नं २ मा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट यसको क्षतिपूर्ति गर्न संभव छैन् । नेपाली कांग्रेस व्यवस्थापिका संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा नै रहेको र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित र नेपाली… विस्तृत समाचार
​सिलवालमाथि फेरि प्रतिशोध
काठमाडौं, ३ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जालझेलका कारण आइजीपी बन्नबाट वञ्चित नवराज सिलवाल बढुवामा रोकिएका छन् । नसियत पाएको देखाएर एआइजी बढुवामा समेत रोकिएपछि देउवाको पूर्वाग्रही र हठी स्वभाव छताछुल्ल भएको छ । प्रहरीमा उत्कृष्ट काम गरेर सबैको वाई वाई पाएपनि सिलवालमाथि राज्यले घोर अन्याय गरेको छ । देउवाकालमा सक्षम र क्षमतावान प्रहरी अधिकृतहरू षड्यन्त्रको शिकार बनाइएको इतिहास पनि छ । अहिले त्यही इतिहास… विस्तृत समाचार
​देउवाको दुई प्रसंग
जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अत्यन्तै धेरै बदनाम हुन पुगेका छन् । साझा सवालको अन्तर्वार्ता र सप्तरी जिल्लाको भाषणले देउवाको कमजोरी छताछुल्ल भएको छ । बेढंग र बेहोसी पारामा प्रस्तुत हुँदा देउवा हाम्रा प्रधानमन्त्री हुन भन्न समेत जनतालाई लाज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । बीबीसी एक्सन मिडियाले उत्पादन गर्ने साझा सवाल चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम हो । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न… विस्तृत समाचार
​सोमलालले निहुराएको राष्ट्रको शिर
२० अषाढ २०७४
विशाल छेत्री । मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै फिलिपिन्सको मनिलास्थित एसियाली विकास बैंकको मुख्यालयमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको जागिर खान जाँदै छन् । मुलुकको कर्मचारीतन्त्रको सर्वोच्च पदमा पुग्नका निम्ति उनले जेजस्ता हत्कण्डा गरे, ती सम्झने हो भने आज जोकोही स्वाभिमानी राष्ट्रसेवकले लाजले शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था छ । आज त्यसलाई समेत बिर्साउने गरी उनी एडीबीमा डलर लोभमा आफ्नो सम्पूर्ण स्वत्व राजनीतिक नेतृत्वको हातमा सुम्पिन… विस्तृत समाचार
​गोपाल पराजुली र लोकमान नजिर
विशाल छेत्री । सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई अवैध घोषित गर्ने क्रममा संवैधानिक परिषदका काम, कर्तव्य र नियुक्तिसम्बन्धी आधारहरुका सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ । त्यसले संवैधानिक परिषदका आगामी निर्णयहरुलाई समेत दिशानिर्देश गर्छ कि गर्दैन भन्ने आगामी दिनले देखाउनेछ । संवैधानिक परिषदले तत्काल अब सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कार्यकालको पहिलो संवैधानिक परिषद बैठकको निर्णय सम्भवतः यही हुनेछ । यसअघि… विस्तृत समाचार
​मधेसमा ओली राष्ट्रवादको विरोध किन ?
डा.बद्रीविशाल पोखरेल । पानीको धारो र कुवा छोएको आरोपमा डुमबस्तीका मधेसी जनताहरु ठालु मधेसीबाट धेरे पटक घोर अपमानित भएको खबर बेलाबखत छापिने गरेका छन् । तल्ला तह र वर्गका महिला र पुरुषलाई राजेन्द्र महतोलगायत ठालु मधेसी नेताहरुले खुल्लारुपमा गोडा धुवाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । बोक्सीका नाममा यही मधेसमा आमाहरुलाई दिसा खुवाइएको घटना मिडियामा प्रमुख समाचार बन्छन् । दाइजो नल्याएको निहुँ झिकेर आम… विस्तृत समाचार
​भुमरीमा देउवा–दाहाल गठबन्धन
३० जेठ २०७४
रवीन्द्र श्रेष्ठ । देउवा दाहाल गठबन्धनको असली परीक्षा बल्ल शुरु भएको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुमध्ये एक राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र देउवा–दाहाल गठवन्धन सरकारबीचको आइतबारको निर्णायक वार्ता असफल भएपछि राजपाले दोस्रो चरणको चुनाव विथोल्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । पुष्पकमल दाहालले सोचेका होलान् कि मासु मासु मैले खाएर हड्डीहड्डीचाहिँ देउवाको भागमा पारेर धेरै ठूलो बुद्धि पु¥याएको छु । तर गृहमन्त्री आफ्नै दलको भएको… विस्तृत समाचार
​देउवाको वर्तमान यस्तै, इतिहास त्यस्तै
२३ जेठ २०७४
१२ वर्षपछि खोलो फर्काउन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्न हुने र नहुने सबै क्रियाकलाप गरेको कुरा जनताले छर्लङ्ग देखेका छन् । यति अपराध त उनले विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदाको बखत समेत गरेका थिएनन् जति नकारात्मक क्रियाकलाप प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उनले अहिले गरे । प्रचण्डलाई काँधमा बोकेर देउवाले लोकतन्त्रको कालो बजार गरेका छन् । नैतिकहीनको त कुरै छाडौं, नेपालमा सायद देउवाभन्दा अरु अनैतिक होलान् । कुनै… विस्तृत समाचार
​पुष्पकमल ‘यूज एन्ड थ्रो’
माओवादीहरु बाहिरबाट जे देखिन्छन्, वास्तविक रुप त्यस्तो हुँदैन । यिनीहरुको आवरण र भित्री रुपमा आकाश पातल फरक छ । बेला बेलामा उनीहरुको असली रुप उदाङ्गो हुन्छ । जुन उनीहरुका लागि निकै महङ्गो पर्ने गर्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुमा पनि रुप र सार फरक छ । समकालिन नेपाली राजनीतिमा देश र नेपाली जनताप्रति बेइमान र उपयोगको राजनीति गर्नेमा… विस्तृत समाचार